A na-azọrọ maka oge mbụ na ọrụ anyanwụ na-emetụta mgbanwe ihu igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
A na-azọrọ maka oge mbụ na ọrụ anyanwụ na-emetụta mgbanwe ihu igwe
Anyị maara na radieshon nke anyanwụ bụ ihe na-achọpụta na ihu mgbanwe ihu igwe, ebe ọ bụ gas na-ekpo ọkụ nke na-ejigide radieshon nke anyanwụ na-eweghachi ihu ụwa na mbara igwe yana ya na okpomọkụ ya.
Otú ọ dị, ruo ugbu a a chọpụtabeghị nke ahụ Ọrụ nke anyanwụ na-agbanwe oke radieshon nke ụwa na-anata ma si otú a na-emepụta ngbanwe na mmetụta na ihu igwe ụwa. Kedu ihe na-eme na Sun iji metụta anyị?
1 Ọrụ anyanwụ
2 Anyanwụ na-emetụta ihu igwe ụwa
3 Nwere ike inyere aka n'ọgụ a na-alụso mgbanwe ihu igwe
Otu ìgwè ndị nchọpụta Switzerland anọwo na-enyocha ihe mmetụta ọrụ anyanwụ nwere ike inwe na ihu igwe ụwa. N'ihi nke a, ha enweela ike ịkọ atụmatụ nke mbụ kpakpando eze ga-emetụta kpakpando ụwa niile. A mara na mbụ na oscillations na ọrụ Sun nwere ike gbanwee ọnụọgụ nke radieshon nke anyanwụ ruru ụwa. Ihe siri ike, nwee isi ma sie ike, Ọ bụ inwe ike ịmata ma ọdịiche ndị a dị na radieshon nke anyanwụ mere ka enwe mmetụta dị omimi na ihu igwe ụwa.
Nkwupụta sitere na nke ndị sayensị nke mụọla ihe omimi a bidoro dabere n'eziokwu bụ na ụzarị Anyanwụ nke ọ tụbara na mbara ala na-ebute ọdịiche dị mkpa karịa ka anyị kwenyere. N'ụzọ dị otú a a na-anwa ịkọwa mgbanwe ihu igwe nke mere na puku afọ gara aga na mbara ala anyị (ihe na-enweghị ihe jikọrọ ya na mgbanwe ihu igwe ugbu a, nke ọrụ mmadụ kpatara kpamkpam mgbe mgbanwe nke ụlọ ọrụ).
Anyanwụ na-emetụta ihu igwe ụwa
Ndị ọkachamara si na Davos Psychomereological Observatory, ndị Switzerland Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag) akwadebela ọrụ nyocha ahụ, Federal Institute of Technology na Zurich na Mahadum Bern. Iji nweta nkwubi okwu siri ike, ha dabere na nyocha kọmputa iji tụọ mmetụta nke Sun na ụwa okpomọkụ n'ime afọ 100 sochirinụ.
Na nyocha ha chọpụtara na ọ dị otu akụkụ nke Sun nwere nnukwu ike na ọrụ ya na 1950. Agbanyeghị, ọrụ anyanwụ a ga-ebelata n'oge na-adịghị anya. Ọmụmụ ihe ahụ na-ebu amụma na radieshon na-esighị ike nke kpakpando nwere ike itinye aka na mkpokọta okpomọkụ nke ụwa nke ọkara ogo.
Mgbe ị na-agụ paragraf a, ị kwenyesiri ike na nsogbu niile nke okpomoku zuru ụwa ọnụ ga-apụ n'anya mgbe Sun na-enye anyị obere radieshon na obere okpomọkụ. Ma nke a abụghị eziokwu. Mmetụta a nke mbenata ọrụ anyanwụ agaghị akwụ ụgwọ maka okpomoku zuru ụwa ọnụ nke mmadụ kpatara, nke butere ịrị elu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ogo centigrade na ọnọdụ ụwa niile ma e jiri ya tụnyere ọnụọgụ ndị edere tupu oge mmepụta ihe.
Nwere ike inyere aka n'ọgụ a na-alụso mgbanwe ihu igwe
Ndị ọkachamara ahụ rụrụ ọrụ na nyocha ahụ, gụnyere onye ntụzi nke Davos Psychomereological Observatory na onye njikwa ọrụ, Werner Schmutz, gosipụtara na nchọpụta nke mbelata a na ọrụ anyanwụ. ọ bụ "ihe dị mkpa" ma nwee ike inye aka dozie nsogbu nke mgbanwe ihu igwe.
Ọ bụrụ na ọnụọgụ nke radieshon anyị na-ebelata, ọ ga-azọpụta anyị obere oge iji belata okpomoku ụwa. Agbanyeghị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na radieshon nke anyanwụ anyị na-ebelata, na ogo nke okpomoku zuru ụwa ọnụ ugbu a, ọbụnadị nke ahụ agaghị arụ ọrụ. O gosiputala na anyi ekwesighi ime ka obi da di na okwu a, ebe obu na mgbe opekata mpe na oru anyanwu, enwere ihe kariri. N'ụzọ ezi uche dị na ya, ọ bụrụ na enwere oke na radieshon nke anyanwụ ma anyị na-aga n'ihu na-abawanye ụba nke ikuku gas, ọ ga-abụ mbibi anyị onwe anyị.
N'ikpeazụ, ndị ọkà mmụta sayensị chetara nke ahụ O siri ezigbo ike ịkọ etu ọrụ kpakpando anyị ga-esi metụta ihu igwe ụwa. Nke a bụ n'ihi na ọ gaghị ekwe omume inwe ike ịnweta data niile gbasara ọrụ anyanwụ na ọtụtụ nde afọ gara aga ma ọ bụ nwee ndekọ nke okpomọkụ nke ụwa anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » A na-azọrọ maka oge mbụ na ọrụ anyanwụ na-emetụta mgbanwe ihu igwe
Ijeri mmadụ abụọ ga-abụ ndị gbara ọsọ ndụ ihu igwe site na 2.000
Otu esi atụ anya mmiri ozuzo site na omume ụmụ anụmanụ